Can i help you , sha - Inglés - Birmano Traducción y ejemplos
Usted buscó: can i help you , shaoxia (Inglés - Birmano)
None of your friends or family can help you since, curiously, almost everyone in your neighborhood has the same problems.
ယင်း၏ မီးခိုးခေါင်းတိုင်သည် မီးခိုးထူများ အုပ်လိုက် မှုတ်ထုတ်နေပြီး သူတို့ ဘာတွေကို ရှို့နေသလဲကို သင်မည်သို့မျှပင် မသိနိုင်။
သင်တို့ပင်ပန်းခြင်း၊ အမှုဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရန် တွေ့ခြင်းဝန်ကို ငါတယောက်တည်း အဘယ်သို့ ထမ်းနိုင် မည်နည်း။
ထိုလူမျိုးတို့သည် ငါ့ထက်သာ၍များ၏။ ငါသည် သူတို့ကို အဘယ်သို့ နှင်ထုတ်နိုင်မည်နည်းဟု သင်သည် စိတ်ထဲမှာ အောက်မေ့လျက်၊
ထိုအမတ်ကလည်း၊ သွန်သင်ပဲ့ပြင်သော သူမရှိလျှင် အဘယ်သို့ နားလည်နိုင်မည်နည်းဟု ဆိုပြီးမှ မိမိနှင့်အတူ ဖိလိပ္ပုတက်၍ထိုင်နေ ပါမည်အကြောင်း တောင်းပန်၏။
ရှင်ဘုရင်က၊ ထာဝရဘုရားကယ်မတော်မမူ လျှင်၊ ငါသည် အဘယ်သို့ ကယ်မနိုင်မည်နည်း။ စပါးနယ်ရာတလင်း၊ စပျစ်သီးနယ်ရာ ကျင်းထဲက ကယ်မနိုင်မည်လောဟူ၍၎င်း၊
သူတို့ပူဇော်သော ဆီဥကို စား၍ သွန်းလောင်း ရာ ပူဇော်သက္ကာ စပျစ်ရည်ကို သောက်သော သူတို့သည် အဘယ်မှာရှိသနည်း။ သူတို့သည် ထ၍ သင်တို့ကို ကွယ် ကာ စောင့်မပါလေစေ။
If you have been stranded due to the pandemic, your nearest consulate may be able to help you findaflight home, arrange an emergency loan so you can buyaticket, or provide an emergency passport.
အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် ကပ်ရောဂါကြောင့် သောင်တင်နေလျှင် သင်နှင့် အနီးဆုံးကောင်စစ်ဝန်ရုံးသည် သင့်အား အိမ်အပြန် လေယာဉ်ကိုရှာဖွေရန်၊ လက်မှတ်ဝယ်ရန်အတွက် အရေးပေါ်ချေးငွေတစ်ရပ်ကို စီစဉ်ပေးရန် သို့မဟုတ် အရေးပေါ် ပတ်စပို့ထုတ်ပေးရန် ကူညီပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။
ကျွန်တော်မအမျိုးအပေါ်သို့ ရောက်ရသော ဘေးကို၎င်း၊ ကျွန်တော်မအမျိုးသားချင်းပျက်စီးသော အမှုကို၎င်း၊ ကျွန်တော်မသည် ကြည့်ရှုခြင်းငှါ၊ အဘယ်သို့ တတ်နိုင်ပါအံ့နည်းဟု လျှောက်ဆို၏။
ယခုမှာသူငယ်သေပြီ။ အဘယ်ကြောင့် အစာရှောင်ရမည်နည်း။ သူငယ်ကိုပြန်၍ ဆောင်ခဲ့နိုင်သလော။ သူရှိရာသို့ ငါသွားရမည်။ သူသည် ငါရှိရာသို့ မပြန်မလာ ရဟု မိန့်တော်မူ၏။
ရှမွေလက၊ အကျွန်ုပ်သည် အဘယ်သို့ သွားနိုင်ပါမည်နည်း။ ရှောလုကြားလျှင် သတ်ပါလိမ့်မည်ဟု လျှောက်သော်၊ ထာဝရဘုရားက၊ နွားမတန်းကိုယူ၍ ငါသည် ထာဝရဘုရားအား ယဇ်ပူဇော်ခြင်းငှါ လာပြီဟု ပြောလော့။
ဤအိမ်တွင်လည်း ကျွန်တော်ထက်သာ၍ ကြီးသောသူမရှိပါ။ကိုယ်မယားဖြစ်သော သခင်မမှတပါး အဘယ်အရာကိုမျှ ကျွန်တော်အား မမြစ်တားပါ။ သို့ဖြစ်လျှင် အပြစ်ကြီးသောဤအမှုကို ကျွန်တော်ပြု၍ ဘုရားသခင်ကို အဘယ်သို့ပြစ်မှားနိုင်သနည်းဟု သခင်၏မယားကိုငြင်း၍ ပြန်ဆို၏။
လာဗန်ကလည်း၊ ဤသမီးတို့သည် ငါ့သမီး ဖြစ်ကြ၏။ ဤသူငယ်တို့သည်၊ ငါ့သားဖြစ်ကြ၏။ ဤတိရစ္ဆာန်တို့လည်း၊ ငါ့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်ကြ၏။ မြင်သမျှ သော ဥစ္စာသည် ငါ့ဥစ္စာဖြစ်၏။ ငါ့သမီးတို့၌၎င်း၊ သူတို့ ဘွားမြင်သော ငါ့သူငယ်တို့၌၎င်း၊ အဘယ်သို့ ငါပြုနိုင် သနည်း။
ဣသရေလအမျိုး၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား၊ ငါ့ကိုမေးလျှောက်စေခြင်းငှါ၊ သင့်ကိုမှာလိုက်သော ယုဒရှင်ဘုရင်အား ဤသို့ပြန်ပြော လော့။ သင်တို့ကိုစစ်ကူခြင်းငှါလာသော ဖာရောဘုရင်၏ ဗိုလ်ခြေတို့သည်သူတို့နေရင်း အဲဂုတ္တုပြည်သို့ ပြန်သွားကြ လိမ့်မည်။
ယနေ့ကျွန်တော်အသက် ရှစ်ဆယ်ရှိပါပြီ။ ကောင်းမကောင်းကို ကျွန်တော် ပိုင်းခြား၍ သိနိုင်ပါ မည်လော။ ကိုယ်တော်ကျွန်သည် အစားအသောက် အရသာကို မြည်းနိုင်ပါမည်လော။ သီချင်းသည် ယောက်ျား၊ သီးချင်းသည်မိန်းမဆိုသောအသံကိုကြားနိုင်ပါမည်လော။ ကိုယ်တော်ကျွန်သည်အရှင်မင်းကြီးကို အဘယ်ကြောင့် နှောင့်ရှက်ရပါမည်နည်း။
umur (Malayo>Árabe)video za x kutombana (Inglés>Suajili)dove sei , saremo anche noi (Italiano>Latín)auguri di buon compleanno (Italiano>Latín)bodoh dalam bahasa pakistan (Indonesio>Pakistaní)ayaw ko na umuwi (Tagalo>Inglés)tumhe dekh raha hun (Hindi>Inglés)tameer (Inglés>Francés)kaimahi (Maorí>Wólof)vistoepiaciuto nelle condizioni in cui si trova (Italiano>Inglés)lets masterbate (Italiano>Inglés)lieu (Inglés>Suajili)haveahappy holiday (Inglés>Hindi)ringene (Danés>Serbio)uomo avvissato mezzo salvato (Italiano>Inglés)wesibhambathiso (Xhosa>Afrikaans)va com deus (Portugués>Italiano)google terjemahan bahasa dayak kenyah (Indonesio>Javanés)uscita del tecnico per intervento di manutenzione (Italiano>Inglés)divenire (Italiano>Latín)bf फिल्म फुल xx xxमूवी xx (Inglés>Hindi)i didn't sleep very well (Inglés>Suajili)india kaisa laga aapko (Hindi>Inglés)i feel like smoking weed (Inglés>Suajili)botte (Italiano>Latín)